के डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तानमा जन्मेका हुन् ?
नोभेम्बर 13, 2016 नोभेम्बर 22, 2016 साइन्स इन्फोटेक0Comments Donald Trump, Pakistan, डोनाल्ड ट्रम्प, पाकिस्तान, पाकिस्तानको न्यूज च्यनल नियो
एजेन्सी, २८ कात्तिक । के डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तानमा जन्मेका हुन् ? डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् । सवैलाई अचम्म लाग्न सक्छ एक पाकिस्तानी टेलिभिजनले नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तानमा जन्मेको दावी गरेको छ ।
पाकिस्तानमा जन्मिएका ट्रम्पको नाम पनि फरक भएको दावी पनि उक्त टेलिभिजनले दावी गरेको छ । पाकिस्तानको न्यूज च्यनल नियोले प्रसारण गरेको एक कार्यक्रममा डोनाल्ड ट्रम्पको जन्म पाकिस्तानको बजिरस्तानमा भएको र उनले मदरसामा शिक्षा हासिल गरेको दावी गरेको छ ।
उनको नाम दाउद इब्राहिम खान रहेको दावी गर्दै च्यानलले ट्रम्पका बाबु आमाको देहान्त सन् १९९५ मा सडक दुर्घटनामा भएको र टुहुरा ट्रम्पले मदरशामा पढेर हुर्किएको समेत दावी गरेको छ ।
ट्रम्पलाई पाकिस्तान पुगेका एक बेलायती सेनालेका क्याप्टेनले धर्मपुत्र बनाएर लण्डन पुर्‍याएको र त्यहाँ नै उनलाई अमेरिकाको ट्रम्प परिवारले धर्मपुत्र बनाएको उक्त च्यानलको दावी छ ।
यदि राष्ट्रपतिको चुनावमा आफु हारेमा आफुले हार स्विकार नगर्ने भनेका थिए । उनको स्वभाव धेरै अक्रोशित हुने र केहि हल्का कठोर हुनाले मुस्लिमसग मेल खाने प्रवृतीको देखिन्छ भन्ने विश्लेषकहरुको पनि आशका रहेको छ ।
जे होस यस पछीको सत्यता के लुकेको छ त्यो सव कुरा भविष्यमा आउला वा नआउला हेर्न वाकी छ ।
थप जानकारीको लागी तलको भिडियोहरु हेर्नुहोला ।
स्रोत : इन्डियन एक्सप्रेस, बिएयुके र नेपाली हेडलाईन्स
← यी उपायहरु अपनाउँनुहोस धनका देवता कुबेर खुशी हुनेछन
७० वर्षपछि पृथ्वीको नजिक सबैभन्दा ठूलो चन्द्रमा देखिने →
बाराक ओबामा अन्तिम अमेरिकी राष्ट्रपति बाबा भान्गाको भविष्यवाणी
नोभेम्बर 10, 2016 साइन्स इन्फोटेक 0
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपति निर्वाचित
नोभेम्बर 9, 2016 नोभेम्बर 9, 2016 साइन्स इन्फोटेक 0
अमेरिकाको राष्ट्रपति को होला ? अनुमान गर्नुहोस त । १) हिलारी क्लिन्टन २) डोनाल्ड ट्रम्प
नोभेम्बर 8, 2016 नोभेम्बर 21, 2016 साइन्स इन्फोटेक 0